नेपालमा सङ्क्रमितभन्दा निको हुनेको प्रतिशत उकालो लाग्यो - हिपमत
नेपालमा सङ्क्रमितभन्दा निको हुनेको प्रतिशत उकालो लाग्यो
नेपालमा कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएका कुल सङ्क्रमितभन्दा कोरोनाभाइरसबाट मुक्त हुनेको सङ्ख्या पहिलोपटक बढेको छ । आइतबारसम्म आठ हजार ५८९ जना सङ्क्रमित निको भई घर फर्केका छन् । नेपालमा कोभिड–१९(सार्स–कोभ–२) का कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या १६ हजार ८०१ छन् । शनिबार ५०.५ प्रतिशत रहेको निको हुने दर आइतबार ५१.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
उपत्यकामा ३४७ सङ्क्रमित
गत जेठ महिनासम्म न्यून सङ्क्रमित फेला पर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक रुपमा सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या बढ्दो छ । जसमध्ये अधिकांश विदेश तथा बाहिरी जिल्लाबाट आएका छन् । तर सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएर सङ्क्रमण हुनेहरू पनि बढी छन् । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा उपत्यकामा फेला पर्ने सङ्क्रमित अस्प्तालमा भर्ना भएका, विमानस्थल भएर आएका र केही कुनै यात्रा वृत्तान्त नरहेका पनि छन् ।
तर उपत्यकामा सङक्रमण दर बाहिरको तुलनामा थोरै पाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सङक्रमण दर शून्य दशमलब पाँच प्रतिशत छ । बाहिर छ प्रतिशत रहेको छ । उपत्यकाबाहिर महिला सङ्क्रमित करिब दश प्रतिशतको हाराहारीमा रही घटबढ हुँदैआएको छ । तर काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितमध्ये ४० प्रतिशत महिला छन् । डा. पाण्डेले यसबारे थप अध्ययन भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
डा. पाण्डेले अनुसार २५ गतेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको १२ स्थानबाट तीन हजार नमूना सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल पाँच हजार नमूना लिने लक्ष्य राखेको छ ।
हाल उपत्यकामा विभिन्न सङ्क्रमण फैलनसक्ने सम्भावित १० स्थानबाट तीन हजार जनाका स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा एक हजार ६२१ जनाको परीक्षणको नतिजा आएको छ । जसमध्ये तीन जनामा सङक्रमणको पुष्टि भएको छ । जुन ०.१८ प्रतिशत हो । जोखिममा रहेका समुदायबाट उक्त नमूना सङ्कलन गरिएको छ । बैङ्क, वित्तीय संस्थान, बजार–पसल, स्वास्थ्यकर्मी र घना बस्तीबाट नमूना सङ्कलन गरिएको छ ।